विचार-ब्लग Archives - Page2of9- Saptakoshionline
महेश प्रसाद गुरागाई ‘आमा’ यो शब्द आफैंमा कति गहन छ अनि कति महान पनि । हर मानिसको जीवनमा आमाको जुन स्थान छ, त्यो कसैसँग तुलनै हुनै सक्दैन, यो अतुलनिय छ, सम्मानित छ । आमाको ममता अनि त्यो मार्गदर्शन दुनियाका कुनै माया र कुनै विश्वका अनेकन दर्शनहरुले भेट्न समेत सक्दैनन् । आमा मानव जगतमा सृष्टिको एउटा पाटो हुन् भने भौतिक जीवनको सबभन्दा ठूलो विश्व विद्यालयकी एक मात्र गुरुमा । आमाको बारेमा जति भने पनि त्...
सिंगो नेपाल राष्ट्रका निर्माणकर्ता बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको वंशवृक्ष, प्रजातन्त्रदाता श्री ५ त्रिभुवनको पौत्र र नेपाली राष्ट्रवादका पृष्ठपोषक राजा महेन्द्रको मध्यम पुत्र एवं विकास चिन्तक राजा वीरेन्द्रका भ्राताका रुपमा हाम्रो मातृभूमि नेपालमा म पैदा भएँ। सदा शान्त, सौम्य, सुन्दर यो गौरवशाली स्वाधीन नेपाल राष्ट्रमा जन्मन पाएको, यहाँकै माटोमा हुर्कन पाएको र यहीँको धर्तीको सेवामा जुट्न र...
ध्यानको आवश्यकता आजको आधुनिक युगमा महत्वपूर्ण अंशको रुपमा रहेको छ । ध्यान अर्थात होस, ध्यान अर्थात जागृत, ध्यान अर्थात आनन्द, ध्यान अर्थात खेलपूर्ण हुनु, ध्यान अर्थात प्रेम, ध्यान अर्थात करुणा यस्ता अनेकौ अर्थबाट ध्यानलाई बुझ्न सकिन्छ । ध्यान सुखमय, आनन्दमय र शान्तिमय जीवन जीउने कला हो ।ध्यान हो वर्तमान, ध्यान हो प्रतिपल, ध्यान हो खुसी, ध्यान हो पूर्ण, ध्यान हो तृप्ती, ध्यान हो मनको मृत्यू, अनेकौ ...
मंगलबार, आषाढ १७, २०७६
इटहरी/ उधोग वणिज्य संघ इटहरीको गणना भइरहेको मत पारीणामले भिम बहादुर पौडेलले जित्ने लगभग पक्कापक्की भएको जस्तो देखिन्छ । अर्थात हालका कार्यवहाँक अध्यक्ष शैलेश कुमार विष्टले हार्ने अनुमान गणना भएका मतका आधारमा चौतर्फी गरिन थालइकेको छ । अध्यक्षमा साथै विष्ट प्यानल सबैले हार्नुमा मत सुन्न बसेका व्यवसायीहरुले अहीले चर्चा गर्न थालेका छन । के छन त शैलेश विष्टको हारको कारणहरु ? हामीले केही उल्लेख गर्ने...
कस्काे लागि आरक्षण के अारक्षण ब्राह्मणहरुले पनि पाएकै छैनन र ? सलियाै देखि दलित काे नाम गरि खाेलियकाे आरक्षणमा किन ताण्डव आरक्षण ब्राह्मणहरुले पनि पाएकै हुन। पढ्ने आरक्षण। यो देशमा सबैले पढ्ने आरक्षण कहाँ पाए र ? ब्राह्मणहरुले वेद पढे। पुराण पढे। कर्मकाण्ड पढे र कर्मकाण्ड गरे। दलितहरुले वेद पढ्न खोज्दा जिब्रो काटियो स्कुल जादा बाहिर बसेर पढ्नु पर्थ्याे सयाै दलित हरुले बनायका र।सिलायका सबैथाेक चले...
अर्बपति तथा विश्वका सफल मानिसहरुले आफ्नो सफलता पछाडिको कारणको रुपमा आफ्नो राम्रो आनीबानी पनि भन्ने गरेका छन् । सफलताको एउटा प्रमुख कारण आनीबानी पनि हो । सफल मानिसहरु राम्रो आनीबानीलाई सधैं फलो गर्छन् र त्यसैको नियममा बाँधिइरहेका हुन्छन् । व्यक्तिगत र व्यवसायिक जीवन अगाडि बढाउनका लागि समेत आदतको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । कयौं सफल मानिस आफूलाई निकै ख्याल गर्छन् र आफ्नो ज्यानदेखि अफिसलाई समेत फिट राख...
आजको दिनमा सामाजिक सञ्जाल निकै शक्तिशाली माध्यम मानिन्छ । सामाजिक सञ्जालका प्रयोग कर्ताहरु पनि प्रत्येक दिन बढिरहेका छन् । उनीहरु आफूले गर्दैछु, कस्तो महसुस गरिरहेको छु के कुराले समस्या दिइरहेको छ भन्ने कुरा तत्काल सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट बाहिर ल्याउने गर्छन् । तर सामाजिक सञ्जालको आवश्यकता भन्दा बढी प्रयोगले कैयाँै समस्या पनि उत्पन्न गराउने गरेको छ । भलै संवादको माध्यम भएकाले यसका बारेमा ठोस ...
नेपालको ईतिहासमा राजसंस्थाको योगदान अतुलनीय र अविस्मरणीय रहेको छ । यो गौरवशाली ईतिहास हरेक विद्यालयका विद्यार्थीलाई पढाईनु पर्ने ईतिहास हो । भारतीयहरू मुगल र ब्रिटिश साम्राज्यसँग हारेका राजाको ईतिहास पनि सगौरव अध्ययन गरिरहेका छन् भने हामीसँग त विश्व साम्राज्यमाथि विजय प्राप्त गरेको तर हार्न नपरेको ईतिहास छ । यस्तो गौरवशाली ईतिहासको अध्ययनबाट भविष्यको पुस्तालाई वञ्चित गराउनुको खास मकसद के हो ? क...
‘नानीदेखि लागेको बानी’ अर्थात बच्चा बेलादेखि लागेको बानी छुट्न गाह्रो हुन्छ । त्यसैले आफ्नो बालबच्चाहरुलाई सानैदेखि राम्रो कुरा सिकाउन जरुरी छ । जसले गर्दा बच्चालाई राम्रो मानिस बन्नको लागि मद्त गर्छ । बच्चालाई राम्रो बानी सिकाउने जिम्मेवारी आमाबुबा र अभिभावकको हो । कतिपय कुराहरु बच्चा आफैले भोगेर सिक्छन् । कतिपय कुराहरु आमाबुवाले नै सिकाउनुपर्ने हुन्छ । कतिपय कुरा ठूलो भएपछि आफै सिक्छन् तर ...
उषाकिरण घिमिरे मुलुकमा गणतन्त्र आएको डेढ दशक पुग्न लागेको छ । जनताको ठूलो सङ्घर्ष र बलिदानको जगमा प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुने क्रममा छ । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी हुनु, सङ्घीय राज्य व्यवस्था बन्नु र सरकारको तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर ४० प्रतिशत महिला स्थानीय तहमा नै निर्वा्चित हुनु गणतन्त्रको उपलब्धि हुन् । नेपाली जनताको लामो त्याग, बलिदान र संघर्षबाट स्थापना भएको ...